DHAGEEYSO,,Maamulka Gobolka Banaadir oo Amrey in laxiro hotelada iyo maqaayadaha liido – Radio Baidoa
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar filish) ayaa shir Guddoomiyay shirka Todobaadlaha ee Maamulka Gobolka Banaadir, kaasi oo ka dhacay xarunta Degmada Shangaani.
Shirkaan oo ay kasoo qeyb-galeen Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Awqaafta iyo Diinta, Guddoomiyaha Guddiga Qaran ee Abaabulka iyo Wacyigelinta ayaa waxaa looga hadlay caabuqa Covid-19 oo dhibaato xoogan ku haaya Dunida.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan oo kulanka faah faahinayey ayaa sheegay in iyada oo la ogyahay in Caabuqa COVID19, si sahlan la isugu gudbin karo, isla markaana ay wadaan Wacyigelin ku aadan ka hortaga Caabuqa, horeyna loo fasaxay Iskuulada dalka si loo yareeyo isu imaatinka Bulshada, ay soo saareen Amaro ku aadan in la yareeyo isku imaatinka Hoteelada iyo Maqaayadaha Muqdisho gaar ahaan kuwa ku yaalla Xeebta Liido.
Sidoo kale waxaa uu faray Bulshada in ay u hogaansamaan fariimaha wacyigelin ee Wasaarada Caafimaadka iyo Waaxda Caafimaadka ee Dowladda Hoose ee Xamar. Iyadoona ay si wadajir ah Barnaamijyada wacyigelin ay iska kaashan doonaan Wasaaradda Caafimaadka, Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta, Guddiga Qaran ee Abaabulka iyo Wacyigelinta iyo Maamulka Gobolka Banaadir.
HOOS Kadhageeyso codka afhayeenka gobolka banaadir saalaxa cmar xassan
Madaxweyne Deni oo kulan Laqaatey Hey,adaha Amaanka Putland